यस्ता मानिसहरु पशुसं’ग यौ:न स:म्प’र्क ग’र्न हुरुक्कै हुन्छन् – Sidha Post 24
यस्ता मानिसहरु पशुसं’ग यौ:न स:म्प’र्क ग’र्न हुरुक्कै हुन्छन्
मानिसले प शुमा-थि गर्ने ब-ला-त्का-र-लाई पाश विक क्रियाकै रुपमा लिइन्छ । तर दुनियामा कोही मानिसहरु यस्ता यौ-न पि-पा-शु हुन्छन् जसले जनावरहरु पनि छा ड्दै-नन् आफ्नो यौ “न प्या” स मे-टा-उन ।
अमेरिकाको उत्तरपूर्वी फ्लो-रि-डा-मा हुने प-शु-क-र-णीका घ “टना” मा बाख्रो नै सबैभन्दा बढि तारो हुने गरेको पाइएको छ । यसै विषयमा स्थानीय क्यारिभेल पत्रिकाले फिचर पनि प्रकाशित गरेको थियो
रिपोर्टमा शरोन क्रुज पिसिना नामकी एक म हिला ले आफ्नो घरका ३ वटा बा-ख्रा-माथि धेरै पटक लगातार ब-ला-“त्का”-र भएको खुलासा गरेकी छिन् । बाख्रा क-र-णी-मा फ्लो”रि”-डा निकै ब दमा न छ ।
सन् २००७ मा ४८ वर्षका एक पुरुषले फ्लोरिडाको मोसी हेडमा बाख्रामाथि ब-ला-त्का-र गरेका थिए । ब “ला”त्का रपछि उनले बाख्राको ह-त्या गरे । त्यसपछि फ्लोरिडामा पशु क-र-णी-लाई यौ-न अ “परा” ध घोषित गरेर अ-वै-ध ठ “हर” गरियो ।
ती पु-रुष-माथि भने पशु चो-री-को आ “रोप” मा ११ महिना २९ दिनको जे “ल स” जाय तोकिसकिएको थियो । बढ्दो पशु क-र-णी-सँगै एउटा प्रश्न उठेको उठ्छ, आखिर मानिसले पशुसँग किन से-क्स ग-र्छ ?
फोरेन्सिक विज्ञहरुका अनुसार यी १० थरीका मानिसहरु प शुकर णीमा संलग्न हुन्छन् ह्युमन एनिमल रोल प्लेयर्स : जसले जना वरसँग कहिल्यैपनि से-“क्स ग” रेका हुँदैनन् । तर से “क्स” को मामिलामा भ-ड्कि-एसँ-गै उनीहरु जनावरप्रति आकषिर्त हुन्छन् ।
रोमान्टिक पाशविक : यस्ता मानिसहरु जनावरलाई पालेर राख्छन् र उनीहरु मनोयौनिकता तर्फ रुची राख्दछन् । तर क-र-णी भने गर्दैनन् ।अस्थीर कल्पनाशील व्यक्ति : यस्ता मानिसहरु त्यस्ता हुन् जाे पशुसँग सहवासको कल्पना गर्छन् तर कहिल्यै गर्दैनन् ।
प-शु-मै हराउने : यस्ता मानिसहरु पशुहरुलाई यौ-न म-नोभा-वनाले स्पर्श गर्दछन् । पशुहरुलाई आ-लिं-ग-न गर्छन् । पशुहरुको यौ-नां-ग पनि छुन्छन् तर से “क्स ग” र्दैनन् ।
अन्धभक्त मानिस : यिनीहरु पशुहरुलाई हरेक कोणबाट हेर्छन् । कहिलेकाहीँ का-मू-क नजरबाट नाप्दछन् । पशुहरुबीचमै हुने यौ-न-क्रि-डा-का बेला पनि उनीहरु बढि नै स-क्रि-य हुन्छन् ।
यौ न पि पा-सु : उनीहरु पशुसँग से-क्स ग-“र्छन्” र से-क्स मात्र होइन पशुलाई पी-“डा” पनि दिन्छन् । मौ-कापर-स्त : उनीहरु यौ-न स-म्ब-न्ध-को मामिलामा सामान्य हुन्छन् तर मौका मिल्नासाथ पशुसँग पनि से-क्स ग-र्न पछि पर्दैनन् ।
नियमित यौ “न पि” पा-सुः यस्ता मानिसहरु पशुसँग से-क्स गर्न बढि मन पराउँछन् । उनीहरुलाई मानिससँग से-“क्स ग”-र्दा भन्दा पशु-सँग से-क्स ग-“र्दा ब”ढि आनन्द आउँछ ।
हिंश्रक : यस्ता मानिसहरु से क्स-का दौ-रान पशुको ह-त्या प-नि गर्दछन् । प”शु म” रि स केपछि समेत पशुमाथि से “क्स” गर्न छाड्दैनन् । ए क्स क्लुसिभ पा शविक : यस्ता मानिसहरु केवल प शुसँग मात्र से :क्स ग: र्दछन् । मानिससँग गर्दैनन् ।
एक रातको 60 हजार लिन्छु… कोहि छ ? परि तामाङ
मलाई राति धेरै गार्हो भयो ! कोहि हुनु हुन्छ मेरो मन बुझाउने !